ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် (အကျဉ်းချုပ်)
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းဌာနခွဲတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးအပါအဝင် အရာထမ်း စုစုပေါင်း (၂၀) ဦးနှင့် အမှုထမ်းစုစုပေါင်း (၄၆) ဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများအရည်အသွေးပြည့်ဝစွာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဖော်ပြပါ အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများကို အဓိကဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
စီမံကိန်းဌာနခွဲ၏ အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ -
(က) အမျိုးသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီ သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း Myanmar Sustainable Development Plan (MSDP) နှင့် အမျိုးသားကျန်းမာရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ခ) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၏ လူ့စွမ်းအားအရင်း အမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပသင်တန်းများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့် အစည်းအဝေးများသို့ စေလွှတ်နိုင်ရေးအတွက် ကိုယ်စား လှယ်များ စိစစ်ရွေးချယ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
ဂ) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရှိ ဗဟိုနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် အဆင့်အသီးသီးရှိ ကျန်းမာရေးဌာနများ အသစ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ဃ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပအထောက်အပံ့ ရငွေ/ချေးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်း များ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
င) လွှတ်တော်ရေးရာနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းများ တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုရလဒ် အခြေအနေများအား လိုအပ်ချက်နှင့်အညီလစဉ်၊ (3)လပတ်၊ (6)လပတ်နှင့် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်း၍ ပြုစုပေးပို့ခြင်းတို့ကို အဓိက ထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
Planning Division (Summary)
According to organization set up of the planning division, there are (20) officers and (46) staffs under the supervision of the Director (planning) and participating in actions implementing to improve the quality of public health care services.
Main Tasks of the Planning Division are
Engaging in development of National Health Plan, Myanmar Sustainable Development Plan (MSDP) and National Health Policy.
Taking responsibility in In-service Health Workforce capacity development and coordinating in selection processes of candidates for respective capacity building training programs, workshops and meetings both locally and internationally.
Taking responsibility for new establishment and upgrading of health facilities at all level of Department of Public Health (Central, State and Region, District and Township level) in accordance with the needs of National Health Plan.
Coordinating body for external aids, loans and grants.
Taking responsibility as focal point for issues concerning with Hluttaw.
Taking Responsibility for development of monthly, quarterly, half -yearly and annual reports of Department of Public Health and summit to respective ministries and organizations.